လူသား၏ ကျဆုံးခြင်းနှင့် အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းç ဒေသနာတော်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ လော့ဒ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုခြင်း အစည်းအဝေး၌ ဟောကြားခြင်း။
“ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါဟောပြောသည်ကို အံ့ဩခြင်းမရှိနှင့် (ယောဟန် ၃း၇)။
ဒီဒေသနာတော်ကို လွန်ခဲ့သော တနင်္ဂနွေနေ့ညတွင် လေ့လာဟောကြားပြီးဖြစ်သည်။ ကနေ့ည လည်းပဲ ၎င်းဒေသနာတော်ဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖန် သွားရောက်စေလိုပါသည်။
“ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်” (ယော ၃း၇)
၌ဖော်ပြခဲ့သော ခရစ်တော်ဘုရား၏ နုတ်တော်ထွက်စကားအားဖြင့် စတင်ကြရအောင်ç ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမည်ဟုပြောရာတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကို ရည်ညွှန်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ အပိုဒ်ငယ် ၃ တွင် သေချာစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။
“ယေရှုက ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို မခံသောသူ မည်သည်ကား ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရဟု ငါအမှန်ဧကန်ဆို၏ (ယောဟန် ၃း၃)။
ဤနေရာတွင် “မခံသောသူ” ဟူသည် လူတိုင်းကို ရည်ညွှန်းနေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အုပ်စုတစ်ခုလုံးနှင့် ဆိုင်ပေသည်။ “ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရမည်” ဟု ခရစ်တော်မိန့်တော်မူခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက် မိန့်ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကျမ်းပိုဒ်က ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ် က လူသားထုတစ်ခုလုံး၏ လိုအပ်ချက်သည် အသစ်သော မွေးဖွားခြင်းအားဖြင့်သာ တွေ့ကြုံနိုင်သည်ကို ပြသနေပါသည်။ လူသည် အသစ်မွေးဖွားဖို့လိုအပ်မှု၏ အကြောင်းခံသည် ဘယ်အရာနည်း? အသစ်တစ်ဖန် မပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော လူသားတို့၏ အခြေအနေက ဘယ်အရာတွေနည်း? ဤအခြေအနေအဖို့ ကုသခြင်းနည်းလမ်းက ဘယ်အရာတွေနည်း? ဤအကြောင်းအရာ (၃) ရပ်တို့၏ အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရိုးရှင်းစွာ ယနေ့ည ဖြေကြားပေးပါမည်။
၁။	ပထမ လူသည် အသစ်တစ်ဖန် မွေးဖွားဖို့လိုအပ်နေမှု၏ အကြောင်းခံသည် အဘယ်နည်း?
ကျေးဇူးပြု၍ ကမ္ဘာဦး ၁း၂၇ ကို လှန်ထားကြပါ။ မတ်တတ်ရပ်လျှက် အတူတကွ အသံကျယ်ကျယ် ဖတ်ကြပါစို့။
“ထိုသို့ ဘုရားသခင်သည် မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ လူကိုဖန်ဆင်း တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ လူယောက်ျm;၊ လူမိန်းမကို ဖန်ဆင်းပြီးလျှင်၊ (ကမ္ဘာ ၁း၂၇)
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ပထမအနေနှင့် မှတ်ထားဖို့ရန်မှာ ထိုလူသည် “ဖန်ဆင်းခံ” သတ္တဝါဖြစ်သည်။ လူသားထုတစ်ခုလုံးသည် အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသောဘ၀ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ လုံး၀မဟုတ်ပါ။ လူသည် ဘုရားသခင်၏ အပြုအမူနှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် မှတ်သားရန်မှာ လူသည် ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းက လူသည် ဘုရားသခင် ၏ သဘောသဘာ၀အတိုင်းနှင့် ဝိညာဉ်ရေးသဏ္ဍာန်တူညီခြင်းဖြင့် ဖန်ဆင်းသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် ပါသည်။
ဘုရားသခင် စဉ်းစားတွေးခေါ်သည် နည်းတူစွာ လူသည်လည်း စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သည်၊ ထို့အတွက်ကြောင့် လူသည် ဘုရားသခင်နှင့်ပင် ကိုယ်သဘောသဘာ၀တူနေသဖြင့် လူသည် ဉာဏ်ပညာ အမြော်အမြင်ရှိသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ခံစားမှုအပြည့်ရှိသကဲ့သို့ လူသားသည်လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဆုံးဖြတ်ချမှတ်နိုင်သည်နည်းတူ လူသား၌လည်း ဆုံးမှတ်ချက် ချမှတ်နိုင်သော လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်များ၌ပင် ထိုစွမ်းရည်များရှိ ကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ခွေးလေးပက်စီပင် ဆုံးဖြတ်တတ်၏။ ခံစားတတ်၏။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်တတ်၏။ အကယ်၍ သင်သည် ထိုခွေးလေးကို တွေးမြင်မည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်ပြောသမျှ ယုံကြည်ပေမည်။ အသိ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက “ငါတွေ့သော အချို့သောမိတ်ဆွေများထက် ဤခွေးလေးက သပ်သပ်ရပ်ရပ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း အသိပင်ရှိလေစွ” ဟု ပြော၏။ သို့ပါသော်လည်း တိရိစ္ဆာန်၌ မရှိသော အရည်အချင်း များ လူသား၌သာရှိပါသည်။ လူသည် အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာနှင့် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (CF The Ryrie Study Bible, ကမ္ဘာ ၁း၂၆ မှတ်စုအရ)။ တိရိစ္ဆာန်တို့၌ ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ “သဏ္ဍာန်တော်” မရှိချေ။ ထိုကဲ့သို့ ဝိညာဉ်အသိစွမ်းရည်ဖြင့် ဖန်ဆင်းသော ကြောင့် လူသည် အနှိုင်းမဲ့သတ္တဝါဖြစ်၏။ လူသား၌သာ ဘုရားသခင်ကို သိနိုင်သော စွမ်းရည်နှင့် ထိုအရှင်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သော အစွမ်းအစရှိပေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကမ္ဘာဦး ၂း၇ ကိုလှန်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ ဖတ်ကြစို့။
“ထို့နောက်၊ ထာ၀ရအရှင် ဘုရားသခင်သည် မြေမှုန့်ဖြင့် လူကို ဖန်ဆင်း၍ သူ၏နှခေါင်းထဲသို့ ဇီ၀အသက်ကို မှုတ်တော်မူလျှင် လူသည် အသက်ရှင်သော သတ္တဝါဖြစ်လေ၏။ (ကမ္ဘာ ၂း၇)
“ဇီ၀အသက်ကိုမှုတ်တော်မူလျှင်” ဟူသော စကားစုကို ဟေပြဲဘာသာမှ ဓညနျ့amahဓ ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာလို (Breath of Life) ကို ဇီ၀အသက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း ညနျ့amah သည် လူသားတို့အထဲ၌ မှုတ်သွင်းထားသောကြောင့် လူသည် အနှိုင်းမဲ့သတ္တဝါဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်တို့၌ ဓညနျ့amahဓ မှုတ်သွင်းခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ လူသားတို့၌သာ ထိုစွမ်းရည်ရှိသောကြောင့် ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊ ထိုအရှင်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ယောဘ ၃၂း၈ ကို ဖတ်ကြပါစို့။
“သို့ရာတွင် လူထဲ၌ ဝိညာဉ်ချိ၏။ ဘုရားသခင်အသက်ရှင်စေတော်မူ သဖြင့် ဉာဏ်ရှိ၏။ (ယောဘ ၃၂း၈)။
ဇီ၀အသက် (သို့မဟုတ်) ညနျ့amah သည် လူသားတို့အထဲ၌ မှုတ်သွင်းထားသဖြင့် ဘုရားရှင်ကို သိရှိခြင်း၊ ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ သိရှိနားလည်ခြင်းစသော စွမ်းရည်များရှိပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း လူသားတို့၏အထဲ၌ရှိ ဝိညာဉ်သည် အာဒံ အပြစ်ထဲကျဆုံးသောကြောင့် အခုသေလျှက်ရှိပေပြီ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂း၁၇ ကို ဖတ်ပါ။ ဘုရားရှင်က အာဒံကိုမိန့်တော်မူ ထားသည်ကို တွေ့မြင်ရကြမည်။ အသံကျယ်လောင်စွာနှင့် ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်ကြပါစို့ “ထိုအပင်၏ အသီးကိုကား မစားရ၊ စားသောနေ့တွင် ဧကန်အမှန် သေရမည်ဟု လူကို ပညတ်ထားတော်မူ၏” (ကမ္ဘာ ၂း၁၇)။
ထိုင်နိုင်ကြပါပြီ။ ဤကျမ်းက ခန္ဓာကိုယ်သေခြင်းကိုသာ ရည်ညွှန်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ အာဒံသည် တားမြစ်ထားသော အသီးကိုစားပြီးနောက် ကာလရှည်ကြာစွာ အသက်ရှင်ခဲ့ပါသေး၏။ သို့ပေမယ့် ဘုရားရှင်သည် “စားသောနေ့တွင် ဧကအမှန်သေရမည်ဟု လူကို ပညတ်တော်မူ၏” ဟု ကမ္ဘာ (၂း၁၇) ၌ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ကောင်းမကောင်း သိကျွမ်းရာ အပင်၏အသီးကိုစားသောနေ့ချင်း၌ပင် အာဒံ သည် ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် သေခဲ့ပါပြီ။ သူ့၏ပြစ်မှားခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဍန်တော်ကိုသာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ပျက်စီးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ "neshamah" ဟုခေါ်သော ဇီ၀အသက်ပင် သေကြေပျက်စီးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည် လူတစ်ဦး အသစ်တဖန် မွေးဖွားရန် အရေးကြီးသော အကြောင်းခံဖြစ်ပါသည်။
၂။	ဒုတိယ၊ အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသော လူသားတို့၏ အခြေအနေက ဘယ်အရာတွေနည်း?
ကျွန်ုပ်ပြောကြားပြီးသကဲ့သို့ လူသားအာဒံ၌ရှိသော ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဍာန်တော်သည် ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ပျက်စီးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ဒေါက်တာ ရိုင်ရီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“လူကိုပင် ကိုယ်သဘာ၀နှင့် အကျင့်သိက္ခာဆိုင်ရာ စံများဖြစ်သော ဘုရားရှင်၏ သဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သူအပြစ်ထဲ လဲကျသောအခါ အကျင့်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်သုန်းခဲ့ရပြီး၊ ပင်ကိုယ် သဘာ၀ဖြစ်သော ဉာဏ်ပညာ၊ စိတ်၏ခံစားမှုနှင့် စိတ်တန်ခိုးတို့ကို ဆက်လက်၍ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်ဆို၏။ (The Ryrie Study Bible ၊ ကမ္ဘာ ၁း၂၆ မှတ်စုအရ)။
လူသားသည် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်၏၊ ပြုမူလှုပ်ရှားတတ်၏။ သို့ပါသော်လည်း အသက်ရှင်သော ဘုရားရှင်နှင့် အဆက်အသွယ် မပြုနိုင်တော့ပေ။ ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဍာန်တော် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည် omru "neshamah" ဟူသော ဇီ၀အသက်ပင်လျှင် သေကြေပျက်စီးခဲ့ရ၏။ “သေကြေပျက်စီးခြင်း” ဟု ကျွန်ုပ် သုံးနှုန်းခြင်းကို အသေအချာ သတိထားစေလို၏။ ကမ္ဘာ ၂း၁၇ ကျမ်းပိုဒ်ထဲက အရေးပါ သောအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခံစားချက်ကို သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။
“ထိုအပင်၏ အသီးကို မစားရ၊ စားသောနေ့တွင် ဧကန်အမှန် သေရမည်” ဟု လူကို ပညတ်ထားတော်မူ၏။ (ကမ္ဘာ ၂း၁၇)။
ထိုနေ့၌ပင် အာဒံသည် ဝိညာဉ်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဓညနျ့amahဓ ဟူသော သူ့အထဲက ဇီ၀ အသက်သေကျေခဲ့ရပြီ။ ထိုအရာသည် ဘာကြောင့်သင့်အဖို့ အရေးပါခဲ့သနည်း? ဘာကြောင့် အာဒံ၌ ဖြစ်ပျက်သမျှ သမိုင်းသည် သင်နှင့်ဆက်စပ်နေပါသနည်း? ဘာကြောင့်ဟူသော အကြောင်းအရာကို ရှင်းပြပါမည်။
“အပြစ်တရားသည် လူတစ်ယောက်အားဖြင့် ဤလောကသို့ဝင်၍ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီ လူအပေါင်းတို့ သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းသို့ ရောက်ရကြ၏” (ရောမ ၅း၁၂)။
“လူအပေါင်ငးတို့သည် အာဒံအားဖြင့် သေခြင်းသို့ရောသည်နည်းတူ” (၁ ကော ၁၅း၂၂)။
“လူအပေါင်းတို့သည် အာဒံအားဖြင့် သေခြင်းသို့ရောက်ကြသည် နည်းတူဟု သမ္မာကျမ်းစာက မည်ကဲ့သို့ ဆိုလိုပါသနည်း? ၎င်း၏ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်မှာ အာဒံသည် ရှေးဦးစွာ ပညတ်တော်ကို ချိုးဖောက်ပြီး အပြစ်ထဲလဲကျသဖြင့် သူမှ ဆင်းသက်လာသူဟူသမျှသည်လည်း အပြစ်သားများ ဖြစ်လာ ကြသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာဒံအားဖြင့် သေကြေပျက်စီးခဲ့ကြရ၏။
“အပြစ်တရားသည် လူတစ်ယောက်အားဖြင့် ဤလောကသို့ဝင်၍ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီ လူအပေါင်းတို့ သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းသို့ ရောက်ရကြ၏။ (ရောမ ၅း၁၂)။
ရှေးဦးစွာ အာဒံမှ အပြစ်ကျူးလွန်ကတည်းကပင် လူအပေါင်းတို့သည်လည်း ပင်ကိုယ်သဘာ၀ အားဖြင့် အပြစ်ထဲကျရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း အပြစ်သားကဲ့သို့ မွေးဖွားလာခြင်းသည် ဘိုးဘေးအာဒံထံမှ အမွေဆက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားတိုင်းသည် အပြစ်ထဲ သေကြေလျှက် မွေးဖွား ကြသည်။
“လူအပေါင်းတို့သည် အာဒံအားဖြင့် သေခြင်းသို့ ရောက်သည်နည်းတူ” (ခကော ၁၅း၂၂)။
ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဍာန်တော်သည် အာဒံ၏ သား^သမီးတိုင်း၊ လူသားတိုင်း၌ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ "neshamah" ဟူသော ဇီ၀အသက်သည်လည်း လူတိုင်း၌ သေကျေပျက်စီးခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ဧဖက် ၄း၁၈ ၌ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်ပြိးမှ အသံကျယ်ကျယ် ၎င်းကျမ်းပိုက်ကို ဖတ်ကြပါစို့၊
“ထိုသူတို့သည် ဉာဏ်အလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲသောအား ဖြင့် အလျှင်းမသိသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အသက်နှင့်ကွာရှင်းလျှက် ရှိကြ၏။ (ဧဖက် ၄း၁၈)။
နားလည်နိုင်စွမ်းသော နာမ်ဝိညာဏ်အသိသည်လည်း သေကြေပျက်စီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် နှင့် စိမ်းကားသွားခဲ့ရပြီး စိတ်နှလုံးသာသည်လည်း မိုက်မဲခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက သင်တို့သည်
“အပြစ်၌သေလျှက်ရှိ၏” ဟု (ဧဖက် ၂း၅) ၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။
“လူအပေါင်းတို့သည် အာဒံအားဖြင့် သေခြင်းသို့ရောက်ကြသည်” (၁ကော ၁၅း၂၂) ဟူ၍ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
သင်တို့ထိုင်နိုင်ကြပါပြီ။ သင်ဘယ်သောအခါမှ မစဉ်းစားခဲ့သော အကြောင်းအရာအတွက် ကျွန်ုပ် တို့သင့်ကို ကူညီပါမည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က မိမိသည် အပြစ်၌ ဥဿုံသေကြေပျက်စီးခဲ့ရပါလားဟူ သော စစ်မှန်သောအသိ၊ ဘုရားသခင်၌ မိမိသည် သေကြေနေသူဟူသော အသိမရှိဘဲ မှန်ကန်သော ပြောင်းလဲသူ ဟူ၍မရှိပါဆိုသော ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာကြီး ဂျော့စ်ဝှိုက်ဖီးလ်၏ တရားဟောချက်ကို အသေအချာ သဘောတူ ကျေနပ်ပါသည်။
အာဒံသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်၊ မိမိ၏အရှက်တရားအတွက် သင်္ဘောတစ်ဖန်ရွက်ဖြင့် ဖုံးကွယ်ခဲ့သည်။
“အသံတော်ကို လူလင်မယားတို့သည်ကြားလျှင် အထံတော်မှလွတ်ခြင်းငှာ၊ ဥယျာဉ်အပင်တို့တွင် ပုန်းကွယ်လျှက်နေကြ၏ (ကမ္ဘာ ၃း၈)။
ထိုကဲ့သို့ လူတိုင်းက ပြုမူနေကြသည်မဟုတ်ပါလား? သူတို့သည် မိမိတို့၏အရှက်သိက္ခာကို ဖုံးကွယ်ရန် သင်္ဘောတစ်ဖန်ရွက်များကို ချုပ်စပ်ကြပြီး ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်မှ ပုန်းရှောင်ခဲ့ ကြသည်။ သင်ကော ဘယ်လိုမျိုးသင်္ဘောတစ်ဖန် ရွက်နှင့်မိမိအရှက်ကို ဖုံးကွယ်မည်နည်း? ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်မှ သင်မည်ကဲ့သို့ ပုန်းရှောင်နိုင်ပါမည်နည်း? သင်သည် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက် တော်မှ ပုန်းရှောင်နေသမျှကာလလုံး ဤကျမ်းပိုဒ်ကို လေ့လာဖို့ ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပတ်သက်သော တရားဒေသနာတော်ကိုလည်း နားထောင်ဖို့ နားခါးစေပါမည်။
“လူအပေါင်းတို့သည် အာဒံအားဖြင့် သေခြင်းသို့ရောက်သည်နည်းတူ (၁ ကော ၁၅း၂၂)။
“ထိုသူတို့သည် ဉာဏ်အလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲသော အားဖြင့် အလျင်းမသိသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အသက်နှင့်ကွာရှင်း လျှက်ရှိကြ၏ (ဧဖက် ၄း၁၈)။
“အပြစ်၌ သေလျှက်ရှိ၏ (ဧဖက် ၂း၅)။
ထို့ကြောင့် ယေရှုဘုရား မိန့်တော်မူသည်မျာ -
“သင်သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရမည်” (ယောဟန် ၃း၇) ၌ ဖော်ပြထားသည်။
၃။	တတိယ၊ ဤအခြေအနေ အနေအထားအတွက် ကုသခြင်းနည်းလမ်းက အဘယ်နည်း?
သင့်အခြေအနေ၊ အနေအထားအဖို့ ကုသဖို့သည် လူသားတို့၏ အစွမ်းအစဖြင့် တတ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ပြိုင်တူလုပ်ဆောင်နိုင်သော လူသားထုတစ်ခုလုံး၏ စွမ်းရည်သည် သင်္ဘောတစ်ဖန်ရွက်ကို ချုပ်စပ်ပြီးမှ အရှက်ကို ဖုန်းကွယ်ရန်သာဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ယနေ့ခေတ်သစ် ဘာသာရေး သမားများက မှားယွင်းစွာ နားလည်လွဲမှားခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်ကြောင့် လူသစ်သတ္တဝါသစ် ဖြစ်လာဖို့ လူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှုအပေါ်၌သာမူတည်ပြီး ဘုရားသခင်၌ မှီခိုခြင်းကို မပြုကြပေ။ ထို့အပြင် ခေတ်သစ်ဘာသာရေးသမားများသည် အလယ်ခေတ်တုန်းက ကာသိုလ်လစ်ဝါဒတို့၏ အမှန်တရားအား ဖြင့် အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ငြင်းဆန်ခဲ့သော အမှားအားလုံးကို မိတ္တူမှန်ကူးယူခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။ ဖိုင်နီးနှင့် သူ့၏တပည့်တော်သားတို့၏ သွန်သင်ချက်ဖြစ်သော အာဒံ၏ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခ်ြငးက သူ့သားစဉ် မြေးဆက်တို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဟူသော သွန်သင်ခြင်းသည် (Thနသူသါငခal Fငခအငသည) “ဘုရား သခင်ကို ရှာဖွေလေ့လာရေးဆိုင်ရာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲပွဲ ဝတ္တုတစ်ပိုဒ်ကဲ့သို့ ကျန်ရစ်ခဲ့လေပြီ။ ထိုသူ၏ သွန်သင်ချက်က သင်သည် အပြစ်ကြောင့် သေမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအကြောင်းကြောင့် “သင့်ကို သင်အသစ်သော စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်နိုင်သည်” ဟု သွန်သင်ခဲ့သည်။ ဖိုင်နီးနှင့် သူ့တပည့်တော်သားများက ဝမ်းနည်းဖွယ် theological fiction ၊ဘုရားသခင်ကို လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ ဝမ်းနည်းဖွယ် ဝတ္တုတစ်ပုဒ် ကို သင်ကြားခဲ့၏။ မည်သည့်အပြစ်သားမဆို သေခြင်းမှ မိမိကိုယ်ကို ရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်သည်ဟူ ၍မရှိဟူ၏ အသင်းတော်သို့ သွားရောက်ပါဝင်ခြင်း၊ ကျမ်းစာတော်မြတ်ကို လေ့လာရုံသက်သက်၊ အဲဒီလိုပဲ ရှေ့ဆေက်လုပ်ဆေင်ခြင်း၊ “အပြစ်သားတစ်ဦး လမ်းဆုံလမ်းခွ၌ အော်ဆုတောင်းခြင်း”၊ နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူပြီး ကယ်တင်ခြင်း အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲအော်ဟစ်ခြင်းက၊ အပေါ်ယံဆန်ခြင်းဖြစ်၍ သင်္ဘော တစ်ဖန်ရွက်နှင့် မိမိအရှက်သိက္ခာကို ဖုံးကွယ်နေသော အာဒံနှင့် သားစဉ်မြေးဆက်တို့၏ ဘုရားသခင် ရှေ့မှောက်မှ ပုန်းရှောင်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အားလုံးသော ကာသိုလ်လစ်ဝင်အသင်း^သူ^သားများအားလုံး တို့သည် မိမိတို့၏ အပြစ်အား ဘုန်းတော်ကြီးများထံ အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ကာ အပြစ်လွှတ်နိုင်မည်ဟူ သော ခံယူချက်များကို စွန့်လွှတ်ပါ။ ထိုအရာသည် အထံတော်မှ ပုန်းရှောင်ကြိုးစားရန် အသုံးပြုသော သင်္ဘောတစ်ဖန် ရွက်သာဖြစ်၏။ ယေရှုဘုရားထံ အပြစ်မှကယ်တင်ဖို့ တောင်းလျှောက်နေပါသလား? ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်မှာ အဘယ်အရာတွေနည်း? အပေါ်ယံဆန် ခေတ်သစ် ဘာသာရေးတို့၏ သင်္ဘောတစ်ဖန်ရွက်သာဖြစ်၏။ ဆုတောင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရ ရှိသည် ဟူသည်မှာ အလယ်ခေတ်ကာသိုလ်လစ်ကျင့်ထုံးနှင့် ဖိုင်နီး၏ ခေတ်သစ်ဝါဒတွေသာဖြစ်သည်။
“သူတစ်ပါး မျက်နှာလွှဲခြင်းကို ခံရသော သူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
“ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့ လမ်းလွဲလျှက် ကိုယ်လမ်းသို့ အသီးသီး လိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏ အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏ (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
ဘုရားသခင် အထံတော်မှ သင်မည်ကဲ့သို့ ပုန်းရှောင်ပါမည်နည်း? အထံတော်မှ မျက်ကွယ်ပြု ရှောင်ပုန်းနိုင်ဖို့ သင်မည်သည့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုမည်နည်း”
သင်၌ မည်သည့်နည်းလမ်းပင် ရှိမည်မဟုတ်၊ သင်၏အထဲ၌ရှိသော ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ပျက်စီး ခဲ့ရသော ဘုရားသဏ္ဍာန်တော်နှင့် သေကြေပျက်စီးခဲ့ရပြီးသော သင့်နှလုံးသား အသစ်ပြင်ဆင်ရန် မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမှ သင်အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပေ။
“ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို ခံရမည် ဟု ငါဟောသည်ကို အံ့ဩခြင်းမရှိနှင့် (ယောဟန် ၃း၇)
မိတ်ဆွေတို့အဖို့ မည်သည့်လမ်းညွှန်ကို ညွှန်ပြပေးရမလဲ?
မိတ်ဆွေတို့ကို မည်ကဲ့သို့ ကူညီရပါမည်နည်း? ဘုရားရှင်က ပရောဖက်ယေဇယျေလကို ဆောင်ရွက်ရန် မိန့်ကြားသကဲ့သို့သာ သင့်ကို ပြောလိုပါသည်။
“ထာ၀ရဘုရားကလည်း ဤအရိုးတို့ပေါ်မှာ ပရောဖက်ပြု၍ ဟောပြောရ မည်မှာ၊ အို သွေးခြောက်သောအရိုးတို့ ထာ၀ရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို နားထောင်ကြလော့။ (ယေဇကျေလ ၃၇း၄)။
“ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံရမည် (ယောဟန် ၃း၇)။
သင်သည် အာဒံထံမှ ဆင်းသက်သော သေမျိုးဖြစ်သည်ကို သင့်ကိုသင့် နားလည်ရပေမည်။ သင်အတွေးအခေါ်ထဲ၌ သင်သည် မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသူဖြစ်၍ သင့်ကိုသင် ကယ်တင်ဖို့ရန် မတတ်နိုင် သူ၊ ယုတ်ညံ့သူဖြစ်သည်ဟု သင့်ကိုသင် သိမြင်ရပါမည်။ သင်သည် သင်အထဲက ယုတ်ညံ့၍ အပြစ်နှင့် ပြည့်နှက်နေသော အတွေးအခေါ်များမှ သင့်ကိုသင့်ဖြတ်တောက်ရပါမည်။ သင့်ကိုသင့် အသစ်သော မျိုးဆက်သစ်ထူထောင်ရေး မျှော်လင့်ချက်များကို လက်လွှတ်ရပါလိမ့်မည်။
လူတစ်ဦးက မိမိသည် လုံး၀ဥဿုံပျက်စိးနေသောသူဖြစ်ကြောင်း အသိရှင်သန်နိုးကြားနေရပါ မည်။ ဘုရားရှင်၏ “အသံတော်” က အာဒံကို ခေါ်နေခဲ့သကဲ့သို့ ယနေ့အပြစ်သားများကို ခေါ်နေသည်ကို သိရပါမည်။ (ကမ္ဘာ ၃း ၈-၉)။ ဘုရားရှင်သည် သင့်အားခေါ်ဖိတ်နေပါသလား?။ သင့်သည် ပြင်းထန်သော အသိခံစားမှုနှင့် အတွင်းနှလုံးသားထဲ အပြစ်သန္ဓေစွဲနေကြောင်း ခံစားရပါသလား? အကယ်၍ သင်ထိုကဲ့သို့ ခံစားနေရပါက ထိုအရာသည် ဘုရားရှင်ဆီကလာသော အသိပင်ဖြစ်၏။ ဘုရားမဲ့ တရားမဲ့ (အမှောင်ကမ္ဘာထုထဲမှ ယေရှုဘုရားသခင်ထံသို့ ချဉ်းကပ်ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။
ကနေ့ည အကြိမ်များစွာ အသုံးပြုခဲ့သော ကျမ်းပိုဒ်၏ ဒုတိယ ထက်ဝက်အများဆုံးကျမ်းအားဖြင့် ဒေသနာတော်ကို အဆုံးသတ်လိုပါ၏။
“လူအပေါင်းတို့သည် အာဒံအားဖြင့် သေခြင်းသို့ရောက်သည်နည်းတူ၊ လူအပေါင်းတို့သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် အသက်ပြန်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက် နေကြလေတဲ့ (၁ ကော ၁၅း၂၂)
“သို့သော်လည်း ပြစ်မှားခြင်းသဘောနှင့် ကျေးဇူးတော် သဘောမတူ။ အကြောင်းမူကား တစ်ယောက်ပြစ်မှားသောအားဖြင့် လူများစွာ သေခြင်သို့ ရောက်ကြ၏။ တစ်ယောက်သောသူ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်၏ အကျိုးသည် လူများတို့၌ သာ၍ က်ြွယ်၀ပြည့်စုံ၏ (ရောမ ၅း၁၅)။
“ထို့ကြောင့် တစ်ယောက်သောသူ၏ ပြစ်မှားခြင်းအားဖြင့် လူအပေါင်းတို့ သည် အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့် တွေ့ကြုံရကြသည်နည်းတူ၊ တစ်ယောက် သောသူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် လူအပေါင်းတို့သည် အသက်နှင့် ယှဉ်သော ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်း အခွင့်ကို ရကြ၏။ အကြောင်းမူ ကား တစ်ယောက်သောသူသည် နားမထောင်သောအားဖြင့် လူများတို့ သည် အပြစ်ရောက်သည်နည်းတူ တစ်ယောက်သောသူသည် နားထောင် သောအားဖြင့် လူများတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အပြစ်တရားသည် သေခြင်းတိုင်အောင် အစိုးရသည်နည်းတူ ငါတို့သခင် ယောရှုခရစ်ပြုစုတော်မူသော ကျေးဇူး တရားသည် ထာ၀ရအသက်နှင့် ယှဉ်သောဖြောင့်မတ်ရာသို့ သွင်းခြင်း အားဖြင့် အစိုးရလေအံ့သနည်း။ (ရောမ ၅း၁၈-၁၉ç ၂၁)။
“ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါဟောပြောသည်ကို အံ့ဩခြင်းမရှိ နှင့် (ယော ၃း၇)
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်၊ ဒေါက်တာဂရိတ်တန်အာယ်ချိန်မှ ရောမ ၅း၁၂-၂၁ ကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်၊ မစ္စတာ ဘင်ဂျမင်ခင်ကာတ် ဂရိဖက်စ်မှ
“ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရမည်”၊ ဝီလျံ.တီ-စလိဘာ-၁၈၉၁-၁၉၀၄၊ သီကုံးရေးသားသော သီချင်းကို သီဆိုကျူးသည်။
“ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါဟောပြောသည်ကို အံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်
၁။	ပထမ၊ လူသည် အသစ်တစ်ဖန် မွေးဖွားဖို့လိုအပ်နေမှု၏ အကြောင်းခံသည် အဘယ်နည်း?
ကမ္ဘာဦး ၂း၇^ ယောဘ ၃၂း၈^ ကမ္ဘာဦး ၂း၁၇
၂။	ဒုတိယ၊ အသစ်တစ်ဖန် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော လူသားတို့၏ အခြေအနေက ဘယ်အရာတွေ နည်း?
ရောမ ၅း၁၂၊ ၁ကော ၁၅း၂၂၊ ဧဖက် ၄း၁၈၊ ဧဖက် ၂း၅၊ ကမ္ဘာဦး ၃း၈
၃။	တတိယ၊ ဤအခြေအနေ၊ အနေအထားအတွက် ကုသခြင်းနည်းလမ်းက အဘယ်နည်း?
ဟေရှာ ၅၃း၃ç၆၊ ယေဇကျေလ ၃၇း၄၊ ၁ ကော ၁၅း၂၂၊ ရောမ ၅း၁၅ç ၁၈-၁၉ç၂၁